अब घरभाडा भन्दा बैंकको किस्ता सस्तो !::Leading Nepal News
अब घरभाडा भन्दा बैंकको किस्ता सस्तो !
बैशाख ३०, काठमाडौं । अब घरभाडा भन्दा बैंकको किस्ता सस्तो पर्ने भएको छ । एभरेष्ट बैंकले यस्तो गज्जबको योजना सार्वजनिक गरेको हो । बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको होम लोन योजनाले मध्यम तथा निम्न वर्गीय परिवारलाई निकै राहत दिने देखिएको छ ।बैंकको यस अभियानको लाभ उठाउँदै घर बनाउने सपना पूरा गर्न प्रेरित गरेको छ।
बैंकले ‘घरभाडा भन्दा बैंकको किस्ता सस्तो भएपछि अब भाडा होइन आफ्नौ घरको किस्ता बुझाऊँ’ भन्ने नारा सहित न्यूनतम सरल मासिक किस्ता ९ हजार ५ सय ९९ को होम लोन ल्याएको जानकारी गराएको छ।यस अभियानमा ग्राहकले सर्भिस चार्जमा २५ प्रतिशत विशेष छुट तथा २५ वर्षसम्मका लागि लोन पाउँने बैंकले जनाएको छ ।
‘सर्भिस विथ स्माईल’ नारा सहित एभरेष्टले ग्राहकको लाभ र सन्तुष्टिलाई ध्यान दिने बताएको छ। एभरेष्ट बैंकले ९४ शाखा, २८ राजस्व संकलन काउन्टर, ११६ एटीएम र बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको छ।